पैसाको लागि पारस शाहसँग कुदेकी होईन ! भन्दै सोनीकाको यस्तो रुप-भिडियो - सुदुर नेपाल
पैसाको लागि पारस शाहसँग कुदेकी होईन ! भन्दै सोनीकाको यस्तो रुप-भिडियो
पारस शाहको पैसाको लागि सोनीका पछि लागेकी देखि सोनीकाले गर्दा पारस शाहले श्रीमती हिमानी शाहसंग डिभोर्स सम्म गर्ने हल्ला समेत सामाजिक संजालमा चल्न थाले । अहिले सामाजिक संजालमा पारस शाह र सोनीकाको लभ अफेयर चलिरहेको छ भन्ने गसिप चलिरहेको छ । यहि विषयमा पारसले भनेका पनि थिए कि ‘हाम्रो सम्बन्ध भगवान जाने’ ।आज सोनीका रोकायाले दुर्गेश थापासंग एउटा गितको भिडियोमा मोडलिङ्ग गरेकी छिन् । उक्त गितको शुटिङ्गको क्रममा सोनीकाले क्यानाडा नेपालसंग कुराकानी गर्दै पारस शाहसंग आफ्नो नाम जोडेर बदनाम गराउनेहरु माथि आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरिन् । आफु सानै देखि दुख पिडा सहदै संघर्ष गर्दै यो स्थान सम्म आईपुगेको कुरा उनले स्पष्ट संग भनेकी छिन् ।
सोनीका रोकाया भन्छिन्, “म यो जाडोमा दुर्गेश थापासंग गितको भिडियोमा डान्स गरिरहेको छु र यो गर्नुको कारण पैसा कमाउन हो । यदि म पारस शाहको पैसाको लागि कुदेको भए यो जाडोमा किन यति दुख गर्थे होला ? पारसको पैसाको लागि सोनीकापछि परेको भन्नेहरुले पहिला मेरो ईतिहास बुझे राम्रो हुन्थ्यो । हुन त मलाई अरुले जे भनुन मतलब त छैन तर त्यस्ता अबुझ व्यक्तिहरुले हेरुन कि सोनीका पैसाको लागि अरुको पछि लाग्दैन बरु मेहेनत गरेर पैसा कमाउन सक्ने आँट भएकी केटि हो । सोनीकाले अन्तर्वार्ताको क्रममा आफुले सधै आफ्नो खुशी गरेको र परिवारको सल्लाह सुझावलाई वास्ता नगर्दा केहि वर्ष अलमलमा परेको र होश उडाएको बताएकी छिन् । सोनीकाले उल्लेख गरे अनुसार आफु सधै आफै केहि गर्ने भन्दै सानै देखि लागेकाले केहि बाटो बिराए जस्तो महसुस गरेको र अहिले आफुलाई ति गल्तिहरुबाट सच्याउन थालेकी छिन् ।etajakhababata
Previous Post: श्रीमतीसँग कुरा गर्दागर्दै चल्यो गोली, अनि फोन अफ भयो!जम्मु कश्मीरमा नेपालीको मृ*त्यु
Next Post: तेस्रो विश्व युद्ध नहुनदिन् अमेरिका-इरानलाई शक्ति राष्ट्रहरु सम्झाउ-एचबी ताम्राकार
आफ्नो सन्तानको लागि बाबाले गरेको संघर्ष गीतमा ‘मेरो प्यारो बाबा’ बजारमा
प्रवासी नेपाली समन्वय समिती (pncc)मलेसिया द्वारा मलेसियाका बिभिन्न राज्यहरुमा हेल्प डेस्क सन्चालन गर्दै
जनप्रतिनिधिहरुलाई एक युवाको यस्तो खुला पत्र (पढ्नुहोस्)
वीरगंज १६ मा जनमत पार्टीको जनपरिचालन समिति गठन
अलपत्र श्रमिकको उद्वार नगरिएको भन्दै मजदुर समाज’द्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
तस्विर भाईरल हुनुका थुप्रै कारण यस्ता छन (पढ्नुहोस्)
युथ काङ्ग्रेस नेपाल प्रदेश न २ ले सङ्गठन विस्तार गरे
सुदूरपश्चिम समाज दक्षिण कोरियाद्वारा ‘सुदूरपश्चिमेली आपतकालीन राहतकोष’मा आर्थिक सहयोग
हेल्प अछाम’द्वारा बाढीका कारण ज्यान गुमाएका परिवारहरुलाई आर्थिक सहयोग